चिकित्सक साथीहरु, अमूल्य मत कसलाई दिने ?
भदौ २५, २०७४ आइतवार १८:२८:३६ प्रकाशित
करिब पाँच दशकअघि स्थापित नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नयाँ कार्यकालका लागि उपाध्यक्ष र ८ सदस्य सहित ९ पदका लागि उपत्यका बाहिर निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने उपत्यका भित्र २९, ३० र ३१ गते निर्वाचन हुँदैछ। आम निर्वाचनमा सर्वसाधारणलाई जस्तै अप्ठ्यारो हुने गरी निर्वाचनमा उपयुक्त, दक्ष, इमान्दार तथा सक्रिय व्यक्तिको चयन गर्न चिकित्सक जस्तो शिक्षित तथा गरिमामय ओहदामा रहेका व्यक्तिलाई असहज त नहुनु पर्ने हो तर निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्वहरुका कारण निर्वाचनको नतिजा हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि अप्रत्यसित त आउने होइन भन्ने आशंका सबैको मनमा रहेको छ।
काउन्सिलले निर्धारण गरेका मुख्यतः पाँच क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने भूमिका पाएका निर्वाचित तथा सरकारद्वारा मनोनित काउन्सिलका सदस्यहरुले अपेक्षित काम गर्न नसकेको चिकित्सा वर्गले महशुस गरेको छ। उनीहरुको गलत रबैयाका कारण नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा लगायत सहज स्वास्थ्य सेवामा हुनुपर्ने भूमिका प्रतिकुल रहेकाले सबै चिकित्सकले अपमानित हुनु परेको छ। यस मनोभावले पनि मतदाता चिकित्सकहरुले आफ्नो अमूल्य मत कुन उम्मेलदवारलाई दिने भनेर प्रश्न गर्नु स्वभाविक हो।
२०७४ श्रावाण १५ गते सम्म अस्थायी वा स्थायी रुपमा काउन्सिलमा दर्ता भई सकेका चिकित्सकले आफ्नो अमुल्य मतमार्फत काउन्सिललाई सकारात्मक मार्ग तिर लैजान सक्ने र नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा तथा सुलभ स्वास्थ्य सेवा वितरणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी काउन्सिलमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्तिलाई चयन गर्नु सबै चिकित्सकको जिम्मेवारी हो । आफ्नो अमूल्य मत मार्फत इमान्दार, जुझारु नेता चयन गर्नु निकै सकसपूर्ण कार्य हो । एकातिर आफ्नो मत खेर त जाने होइन भन्ने शंका रहने हुन्छ भने अर्को तिर आफ्नो मत असल व्यक्तिका लागि भन्ने धारण राख्नु नितान्त जरुरी छ । आफ्नो मत गलत व्यक्तिको जितका लागि प्रयोग हुँदा पछुतो होला तर असल व्यक्तिलाई दिँदा हारे पनि सहर्ष स्वीकार्न सकिन्छ । त्यसैले असल उम्मेदवारका पक्षमा मतदान गर्न विनम्र अनुरोध छ।
निर्वाचन प्रचारका क्रममा चिकित्सकहरुले काउन्सिलले चिकित्सक हकहितका लागि कुनै आजाव उठाएनन्, चिकित्सको सुरक्षाको विषयमा गुनै कदम चालेनन्, आम जनताले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पाउने प्रत्यक्ष काम गर्न सकेनन् भन्ने गुनासो गरे । मतदाताको भावना विपरित भएमा आफ्नो मत काटिने हो किभन्ने सोचेर उम्मेदवारहरुले पनि यी विषय हाम्रो कार्य क्षेत्र भित्र पर्दैन भने ।
यथार्थ कुरा खुलेर भन्न सकेनन् । चिकित्सकलाई थाहा छ प्रत्यक्ष रुपमा उनीहरुले यसको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनन् । तर, परोक्ष रुपमा यो काम नियामक निकायले नै गर्ने हो र त्यहाँ उनीहरु थिए र छन् । मतदाताले पनि उनीहरु के काम गर्न सक्छन् र के गर्न सक्दैनन् बुझ्नुपर्छ । जसले गर्दा उनीहरुको दायरा भन्दा बढी अपेक्षा हुँदैन। आगामी दिनमा वस्तुनिष्ठ भएर आरोप वा गुनासो गर्न सकिन्छ।
के हो काउन्सिलको कार्यक्षेत्र ?
मुलतः काउन्सिलले चिकित्सकको योग्यता पहिचान गरी परीक्षा प्रणालीमा उत्तीर्ण भएकालाई प्रमाणपत्र दिने, चिकित्सकीय पेशा सहज रुपमा सञ्चालन गर्न नीति निर्माण गर्ने तथा नेपालको स्वास्थ्य सेवा लाई प्रभावकारी बनाउन अप्रत्यक्ष रुपमा टेवा पु¥याउने गर्छ । मेडिकल शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन गुणस्तरको आधारमा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने गर्छ तर यस विषयमा काउन्सिलका सदस्य चुकेको देखिन्छ । आफैं सदस्य नभए पनि आफ्नो अप्रत्यक्ष भूमिका रहने गरी बाहिरका चिकित्सकहरु सदस्य रहेको समिति मार्फत गलत नियतका साथ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने गरेको देखिन्छ।
विवादित नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन यसैको परिणम रहेको भन्न कसैलाई असहज नहोला । यस्ता गतिविधीले काउन्सिलमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको र मेडिकल शिक्षा तथा आम जनताको स्वास्थ्यमा अप्रत्यक्षरुपमा नकारत्मक प्रभाव पर्ने गरेको छ । तसर्थ यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ । साथै काउन्सिलले मेडिकल शिक्षा तथा परीक्षा व्यवस्था सम्बन्धी नीति नियम निर्धारण गर्ने गर्दछ भने मापदण्ड नपुगेमा शिक्षण संस्थालाई कारवाही वा खारेजी गर्न सक्छ । काउन्सिलका सदस्यहरु विगतमा पैसाको लोभमा गुणस्तर नभएका शिक्षण संस्थालाई झन् प्रोत्साहन गरेको भन्ने बुझिन्छ । काउन्सिलका सदस्यहरुले आउने दिनहरुमा काउन्सिलको मापदण्ड भित्र रही सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ।
आफ्नो अमूल्य मत कसलाई ?
हुनत काउन्सिलले गर्नुपर्ने काम समेत अधिकतर सदस्यहरु चुकेको देखिन्छ । मात्र आफ्नो अस्तित्व जोगाउन वा पैसाको चलखेलका लागि पुनः उम्मेदवारी दिएको भन्ने धेरै गुनासो सुन्नमा आएको छ । अर्कातिर विगतका सबै सदस्य खराब थिए भन्ने पनि होइन । त्यस भित्रका इमान्दार व्यक्तिको पहिचान गर्न सहज भने अवश्य छैन । यसैगरी नयाँ आउने अनुहारलाई पनि पत्याइहाल्नु पर्ने कारण के ? छनोट सहज छैन । तर पनि आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म असल व्यक्तिको चयन गर्न आवश्यक छ । आफ्नो अमूल्य मत काउन्सिलको विकास, प्रविधिक रुपमा आधुनिकिकरण, काउन्सिललाई दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने दक्ष व्यक्तिको चयन नै आजको आवश्यकता हो । प्रभावकारी एजेन्डा वा प्लान लिएर कोही उम्मेदवार आएका छन् जस्तो लाग्दैन । कतिले त चिकित्सक रिझाउन काउन्सिलको मापदण्ड भन्दा बाहिरको काम समेत गर्ने आश्वासन बाँडिरहेका छन्।
अन्तमा, निर्वाचनमा प्रभाव पर्ने भोज–भतेर, चिनजान, नातागोता, जाती, क्षेत्र, बर्ण भन्दा माथि उठी असल व्यक्ति चयनका लागि निर्वाचनमा मतदान गरौं । हामी सबै चिकित्सक शिक्षत छौं । गल्ती भए पनि असल, दक्ष तथा सक्षम व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्छौं । त्यसैले हाम्रो र चिनेका भन्दा पनि राम्रो र चिकित्सकीय क्षेत्रको सुधारका लागि आफ्नो समय, कर्म खर्च गर्ने सक्ने, काउन्सिलमा मौलाएको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै व्यवस्थित तथा विश्वासिलो काउन्सिलको रुपमा स्थापित गर्न सक्ने व्यक्तिको चयनमा जोड दिउँ र गलत व्यक्तिलाई पाखा लगाऔंं। आफ्नो अमूल्य मतको सदुपयोग गरौैैं । आजको आवश्यकता यही हो।
डा साह दमक स्थित निम्स नेशनल अस्पतालमा कार्यरत छन्।